Waldaan Hawaasa Oromoo Awuroopaa (WHOA)/ Oromo Community Association in Europe (OCAE) -
Waldaan Hawaasa Oromoo Awuroopaa (WHOA)/ Oromo Community Association in Europe (OCAE)
e.V. (Inc.) Irreecha/Irreessa bara 2015 kan cinaa (bukkee) Hora Arsadiitti geggeessamu ilaalchisee
tumsa (backing) ykn yaadannoo (remembrance) isaa ummata Oromoof mirkaneesa.
Baga ganna dhoqqaa’aa fi dukkanaa’aa baatanii ifa (booqaa) birraa argitan. Irreessi/Irreechi
baranaa (kan bara 2015) kan naggaa, kan jiruu fi jireenyaa nuuf haa ta’u.
Ayyaanni irreechaa, malkaa fi hora gurguddoo cinaatti ykn bukkeetti geggeessama. Ayyaanni
Irreechaa “Ayyaana Birraa ykn Xaddacha Saaquu (yeroo ganni ba’ee Abbaan Gadaa Xaddacha
Saaquudha)” jedhamuunis ni beekama.
Ayyaana irreechaa bifa lamaan kabajama. Inni tokko hidda dhalootaa ykn gosti naannawaa walitti
dhiyeenyatti argaman hundi walitti qabamanii gamtaadhaan faaruu irreechaaf faarsamu jechaa
tulluu ykn malkaa naannawa dhiyeenyatti argamutti deemanii angafaa quxusuun eebbifatanii
Sirni kabaja ayyaana irreechaa inni lammaffaan immoo sadarkaa biyyoleessaatti giddugaleessa
tokkotti kabajamuudha. Akka ummata Oromootti giddugaleessi kun Tuulama keessa magaalaa
Bishooftuu, Hora Arsadii ta’eetu beekama. Horri Arsadii yoomii jalqabee giddugala irreeffannaa
ummata Oromoo akka ta’e odeeffannoon ga’aa ta’e yoo jiraatuu baateyyuu maanguddoon Oromoo
garuu dhalootumaanuu achumatti irreeffachaa akka turan dubbatu.
Sirni kabaja ayyaana Irreechaa kan sadarkaa biyyoleessaatti kabajamus ta’ee kan gosa gosaan
iddoo iddootti kabajamu lamaanuu haali itti irreeffatamu walfakkaataadha. Irreecha sadarkaa
biyyoleessatti kabajamu kan adda godhu Abbootiin Gadaa shananii, kan bakka adda addaa jiran,
Abbootiin Muudaa fi warri angafaa iddoo Irreechaatti, Hora Arsadiitti, ba’uudha. Kadhaan Waaqaa
fi eebbi eebbifamus akka biyyoleessaatti.
Irreechi cinaa/bukkee Hora Harsadiitti geggeessamu irreecha gosaa osoo/otoo hintaane Irreecha
biyyoleessaatti. Oromoo hundatu ba’ee irreeffata jechuudha. Abbootiin Gadaa, bakka adda addaa
jiran, Abbootiin Muudaa fi warri angafaa gaaf sana hinhafan.
Sirni irreeffannaa fi irreechi ummata Oromoo biratti erga ummatichi uumame irra eegalee kan
beekamu dha. Ayyaanni irreechaa/irreesaa ummata Oromoo biratti durdurii irraa ka’ee/eegalee
beekama jechaadha. Horri Arsadii iddoo Oromoonni Tuulamaa jaarraa dheeraa dura itti
hirreeffachaa turaniidha. Arsadii maqaa namaa yoo ta’u gosa Liiban keessaa Abbaa Malkaa nama
Previous Master planii Addis Ababaa wayyaanee fi Icciitii isa duuba jiru…. Of baraaruuf tokkummaan haa kaanu!
Next Food Crisis at the Horn of Africa